जवान देखिन यी प्राकृतिक उपाय अपनाउनुहाेस्
काठमाडौं - उमेर बढ्दै जाँदा धेरैमा स्वाभाविक उमेरभन्दा कम देखिने रहर जोकोहीलाई लाग्न सक्छ । मानिसहरू त्यसका लागि विभिन्न कस्मेटिक प्रडक्ट प्रयोग गर्छन् । तपाईंले कृत्रिम होइन, प्राकृतिक कुराको प्रयोगबाट पनि आफूलाई जवान देखाउन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि ...
महि पिउनुहोस स्वस्थ रहनुहोस !
एजेन्सी - गर्मी समयमा प्यास मेट्न तथा गर्मी भगाउन प्रायले कोल्ड ड्रिङ्क्सको सहायता लिने गर्दछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ गर्मी मौसममा कोल्ड ड्रिक्स भन्दा फाइदाजनक हुन्छ मही ।नियमित रुपमा मही खानाले पेटसम्बन्धी सम्पुर्ण रोग निको हुन्छ । यसमा पाइने तत्वल ...
म्याडेटप्राप्त सरकारी वार्ता टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने डा. केसीको भनाइ
काठमाडौं- डा. गोविन्द केसीले म्याडेटप्राप्त सरकारी वार्ता टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने बताएका छन् ।डा. केसीले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण नबनाएसम्म अर्को चरणको वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको भन्दै वार्तालाई तार्किक निष्क ...
कस्तो छ अहिले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडौं- जुम्लामा पुगेर अनशन बसेका डा। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ ।पछिल्लो समय सास फेर्न कठिन भएपछि डा। केसी आत्तिने गरेका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार आइतबार रातिदेखि देखिएको श्वासप्रश्वासको समस्या बढ्दै गएको छ । ...
दाँतको दुखाइबाट जोगिने उपायहरु, अवश्य जान्नुहोस्
काठमाडौं-निमपत्ताः निमको पातमा व्याक्टेरियाबिरुद्ध लड्ने गुणसमेत हुने भएकाले निमपत्ता दुखाई कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो। हरियो निमपत्ता नभएमा सुकेको पातलाई पानीमा पकाएर सो मन तातो पानीले कुल्ला गर्न सकिन्छ । ताजा निमको पातलाई पखालेर नुन मिसाई प ...
काठमाडौं - जुम्लामा पन्ध्र दिनदेखि अनशन बसिरहेका डा गोविन्द केसीले औषधि प्रयोग गर्न नमान्दा उनलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले च्याप्दै लगेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।डा केसीले औषधि लिएर अनशनमा बस्नुको कुनै अर्थ नरहेन भन्दै स्वास्थ्य अवस्थ ...